Ukuvumelanisa uhlelo lokuhweba - Uhlelo ukuvumelanisa
Umsakazo Osemthethweni we- NAB Show, Umkhiqizi we- NAB Bonisa LIVE NAB Bonisa Izindaba: Ubunikazi bokusakaza, i- TV ne- Radio Technology kanye ne- Post Production News. Ukusetshenziswa kwesicelo senkampani kungaphansi kokuvumelana nemibandela nemibandela engezansi.
Sicela ufunde imigomo nemibandela ngezansi ngokucophelela ngaphambi kokuvuma. I- Adobe Photoshop Album Starter Edition iwuphawu lokuhweba noma wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwe- Adobe Systems Incorporated e- United States kanye / noma kwamanye amazwe.
Ukuhweba ngokomzwelo akudingeki kube yinto embi - ikakhulu uma ulawula. Nansi okuhle, okubi, nokuhweba kokuhweba ngokomzwelo.
Ukuvumelanisa uhlelo lokuhweba. I- NAB Bonisa Izindaba nge- Broadcast Beat.
I- Ericsson wuphawu lokuhweba noma wuphawu lokuhweba olubhalisiwe lwakwa- Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Akukho okwenziwayo Ukuthi noma yikuphi i- akhawunti izokwazi noma izokwazi ukuzuza inzuzo noma ilahlekelwe okufanayo kulabo abonisiwe; Eqinisweni, kukhona ukuhlukana okuvame ukwedlula phakathi kwemiphumela yokusebenza ngokulinganayo kanye nemiphumela yangempela Okutholakele nganoma yiluphi uhlelo lokuhweba oluthile.
Abathengisi be forex bomthetho
Kungenzeka ukuthi izinketho zabasebenzi